DESelect- Salesforce AppExchange | အတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာဖွင့်ခြင်းဖြေရှင်းချက် Martech Zone
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ဖောက်သည်များနှင့်အတူ 1:1 ခရီးများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ၊ လျင်မြန်စွာ၊ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ Salesforce Marketing Cloud (SFMC).
SFMC သည် ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကို ပေးဆောင်ပြီး အဆိုပါ ဘက်စုံစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်ခရီး၏ အဆင့်များတစ်လျှောက်ဖောက်သည်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Marketing Cloud သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား ၎င်းတို့၏ဒေတာမော်ဒယ်များကို သတ်မှတ်ရန်သာမက ဒေတာတိုးချဲ့မှုများဟုသိကြသော ဒေတာအရင်းအမြစ်များစွာကို ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် အပ်လုဒ်တင်ခြင်းကိုလည်း အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
SFMC မှ ပေးဆောင်သော ကြီးမားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Cloud တွင် လုပ်ဆောင်မှုများ အများအပြားကို SQL queries ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့်အချက်ကြောင့် အဓိကအားဖြင့် ရည်ညွှန်းပါသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစီရင်ခံခြင်းကဲ့သို့သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများသည် စျေးကွက်သမားများအား စစ်ထုတ်ရန်၊ ဖြည့်စည်းရန် သို့မဟုတ် ဒေတာတိုးချဲ့မှုများကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Cloud တွင် သီးခြား SQL မေးမြန်းမှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူအနည်းငယ်ကသာ SQL queries များကို လွတ်လပ်စွာရေးသားခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အမှားရှာခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ရှိပြီး ခွဲခြမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အချိန်ကုန် (ထို့ကြောင့်စျေးကြီးသည်) နှင့် မကြာခဏဆိုသလို အမှားအယွင်းများဖြစ်တတ်သည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းတွင်မဆို ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးမှာ SFMC တွင် ၎င်းတို့၏ဒေတာကို စီမံခန့်ခွဲရန် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနသည် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတွင် ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပတွင် မှီခိုနေရခြင်းဖြစ်သည်။
DESelect သည် Salesforce AppExchange အတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဒေတာဖွင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အထူးပြုပါသည်။ ၎င်း၏ပထမဆုံးဆွဲယူခြင်းဖြေရှင်းချက်၊ DESelect Segment သည် coding အတွေ့အကြုံမရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် အထူးဖန်တီးထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ထည့်သွင်းပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း tool ကို ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်စေခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် ပစ်မှတ်အုပ်စုများကို ခွဲခြမ်းခြင်းဖြင့် ချက်ချင်းစတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုများ။ DESelect အပိုင်းဖြင့်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် SQL Query တစ်ခုတည်းကို ရေးသားရန် မလိုအပ်ပါ။
DESelect တွင် ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက် Salesforce Marketing Cloud တွင် ROI တိုးမြှင့်ရန် အဆင်သင့်ဖြေရှင်းချက်များစွာ ရှိပါသည်။
အပိုင်းကို ဖြုတ်ပါ။ ရွေးချယ်မှုများမှတစ်ဆင့် အလိုလိုသိသာသော်လည်း အားကောင်းသည့် အပိုင်းခွဲခြင်းအင်္ဂါရပ်များကို ပေးဆောင်သည်။ ရွေးချယ်မှုများသည် အသုံးပြုသူများအား SQL queries အတွက် လိုအပ်မှုကို ပျက်ပြားစေသည့်ပုံစံဖြင့် အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စစ်ထုတ်မှုများကို အသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ ကိရိယာကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် SFMC တွင် အပိုင်းခွဲခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကို 52% ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Cloud မှ ရရှိနိုင်သော ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကို အပြည့်အ၀ ဆက်လက်အသုံးပြုနေချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ကမ်ပိန်းများကို %23 အထိ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ စတင်နိုင်သည် ။ DESelect သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကို အပိုင်းခွဲ၊ ပစ်မှတ်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်မှုများကို လွတ်လပ်စွာ (ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူများမလိုအပ်ဘဲ) နှင့် ယခင်ကထက် ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုဖြင့် လွတ်လပ်စွာပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။
ချိတ်ဆက်မှုကို ဖျက်ရန် ရွေးချယ်ပါ။ webhooks မှတဆင့် မည်သည့်ဒေတာအရင်းအမြစ်ကိုမဆို အလွယ်တကူပေါင်းစပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာပေါင်းစပ်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် (API ကို) အင်္ဂါရပ်များကို ဆွဲယူ၍ချပေးရုံမှတပါး အခြားဘာမျှမသုံးဘဲ Salesforce Marketing Cloud နှင့်/သို့မဟုတ် Salesforce CDP နှင့် back သို့။ ကြီးမားသောပေါင်းစပ်ကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ DESelect Connect ကို အခြားဖြေရှင်းချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက စျေးနှုန်းသက်သာပြီး အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူစေသည်။ DSelect ထုတ်ကုန်များအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ Connect သည် တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက် မည်သည့်စက်ရပ်စရာမှ မလိုအပ်ဘဲ၊ သင်ရိုးရှင်းစွာ plug-and-play လုပ်ပါ။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ၎င်းသည် self-hosting မလိုအပ်ဘဲ API ခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက်အပေါ် SFMC ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ရှာဖွေမှုကို ဖျက်ရန် ရွေးချယ်ပါ။ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး cloud တွင် မည်သည့်အရာကိုမဆို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ကူညီပေးရန်အတွက် Chrome Extension တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသော ရှာဖွေမှုဘားသည် သင့်အား အောက်ပါတို့အပါအဝင် ဒေတာတိုးချဲ့မှုများကို ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။
ယခုလတွင်၊ Deselect သည် Search in ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ AppExchange. ထုတ်ကုန်ကို Salesforce စျေးကွက်တွင် ထည့်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ chrome extension များကို မပံ့ပိုးသော အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်သော အသုံးပြုသူများထံမှ ရေပန်းစားသော တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယခု၊ Marketing Cloud အသုံးပြုသူတိုင်းသည် ဤအသုံးပြုသူနှင့် အဆင်ပြေပြီး အချိန်ကုန်သက်သာသော ကိရိယာ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာ တိုးချဲ့မှုများကို အတူတကွ ပူးပေါင်းပါ။ - အသုံးပြုသူများသည် ဒေတာတိုးချဲ့မှုများကို အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့နှင့် မည်သို့ဆက်စပ်ကြောင်း သတ်မှတ်ရန် ဒရွတ်ဆွဲခြင်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ဤဆက်ဆံရေးများကို ကြိုတင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
မှတ်တမ်းများကို ဖယ်ထုတ်ပါ။ - ဒေတာတိုးချဲ့မှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းကဲ့သို့ပင်၊ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရွေးချယ်မှုမှ ဖယ်ထုတ်လိုသော မှတ်တမ်းများကို ပြသနိုင်သည်။
ဒေတာရင်းမြစ်များကို ပေါင်းထည့်ပါ။ - ၎င်းသည်လွယ်ကူသည်။ ဖယ်ပါ မတူညီသောဒေတာရင်းမြစ်များမှ အဆက်အသွယ်များကို ပေါင်းထည့်ရန်။
စစ်ထုတ်မှုစံနှုန်းများကို အသုံးပြုပါ။ - အသုံးပြုသူများသည် နယ်ပယ်ဖော်မတ်အားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဒေတာတိုးချဲ့မှုများနှင့် အရင်းအမြစ်များတစ်လျှောက် စစ်ထုတ်မှုများစွာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
တွက်ချက်မှုများလုပ်ဆောင်ပါ။ - ဖောက်သည်တစ်ဦးဝယ်ယူမှုမည်မျှပြုလုပ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် ဖောက်သည်မည်မျှသုံးစွဲခဲ့သည်ကဲ့သို့သော ဒေတာစုပေါင်းခြင်းနှင့် တွက်ချက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေခြင်းတို့ကို နောက်ဆက်တွဲမေးမြန်းမှုများကို ခွင့်ပြုသည်။
ရလဒ်များကို စီခွဲပြီး ကန့်သတ်ပါ။ - အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို အက္ခရာစဉ်အလိုက်၊ ရက်စွဲအလိုက်၊ သို့မဟုတ် ယုတ္တိရှိသော အခြားနည်းလမ်းဖြင့် စီစဥ်နိုင်သည်။ လိုအပ်ပါက ရလဒ်အရေအတွက်ကိုလည်း ကန့်သတ်နိုင်သည်။
ရွေးစရာစာရင်းများကို သတ်မှတ်ပြီး အသုံးပြုပါ။ - သုံးစွဲသူများသည် ရွေးကောက်ခံစာရင်းတန်ဖိုးများနှင့် အညွှန်းများကို စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ကို ပိုမိုသေချာစွာ စစ်ထုတ်နိုင်စေပါသည်။
လက်စွဲ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းအခြေခံတန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်ပါ။ - အသုံးပြုသူများသည် ဥပမာအားဖြင့်၊ လက်စွဲ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းအခြေခံတန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အမြိုးသမီး ဖြစ်လာ လွမ်း နှင့် အထီး ဖြစ်လာ Mister.
စည်းကမ်းများဖြင့် မှတ်တမ်းများကို ပွားပါ။ - မှတ်တမ်းများကို ဦးစားပေး၍ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အများအပြားဖြင့် ပွားနိုင်သည်။
ရေတံခွန် အပိုင်းကို အသုံးပြုပါ။ - အသုံးပြုသူများသည် 'waterfall segmentation' ကိုအသုံးပြုရန် cascading စည်းမျဉ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
လက်ရှိတွင်၊ DESelect အား Volvo Cars Europe၊ T-Mobile၊ HelloFresh နှင့် A1 Telekom ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်များက ယုံကြည်လက်ခံထားသည်။ အက်ပ်အား ထည့်သွင်းသည့်နေ့မှစ၍ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော်လည်း ကနဦးအဆင့်တွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့် သီးသန့်ပံ့ပိုးမှုများရှိသည့် ၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒသည် စဉ်ဆက်မပြတ်အောင်မြင်မှုသတင်းများကို ရရှိစေပါသည်။
Emerald Case Study- ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် မြ အကြီးစား တိုက်ရိုက်နှင့် နှစ်မြှုပ်ထားသော B2B ပွဲများနှင့် အရောင်းပြပွဲများ၏ အော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 1985 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဤစျေးကွက်ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်သည် ပွဲပေါင်း 1.9 ပွဲနှင့် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှု 142 ခုတွင် သုံးစွဲသူပေါင်း 16 သန်းကျော်ကို ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။
Emerald သည် မကြာသေးမီက SFMC ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ cloud ကိုအသုံးပြုပြီးနောက် မကြာမီတွင်၊ ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့သည် SQL ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများအတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်မရှိသော SQL queries များအပေါ် မည်မျှမှီခိုနေရသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ဒေတာတိုးချဲ့မှုများကို ကြိုတင်ဖန်တီးရာတွင် ထိရောက်မှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နယ်ပယ်အားလုံးကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ရန် ပြင်ညီမှုမရှိဘဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
DESelect ကို အသုံးမပြုမီ၊ Emerald ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏ဗဟိုအဖွဲ့သည် ယခင်က အပိုင်းများကို တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ဒေတာဘေ့စ်ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိခဲ့ပါ။ အပိုင်းများကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် အမှီအခိုကင်းစွာ ဖန်တီးနေချိန်တွင် DESelect သည် ၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အား ဒေတာများအားလုံးကို ဝင်ရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန် Emerald ကို ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ယခု၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ SFMC အသုံးပြုသူများကို လုံးလုံးလျားလျား ဖွင့်နိုင်စေရန် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများထံ DESelect ထုတ်ပေးရန်ပင် ရှာဖွေနေပါသည်။
DSelect သည် စွမ်းဆောင်ရည် 50% တိုးလာပါသည်။ အခုအချိန်မှာ ad-hoc တစ်ခုခုလုပ်ရတာ ပိုလွယ်တယ်။
Gregory Nappi၊ Emerald မှ Sr. ဒါရိုက်တာ၊ ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်
မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ပိုမိုလေ့လာရန် ဖယ်ပါ သင့်အဖွဲ့အစည်းကို ကူညီနိုင်သည်-
DESelect ကို ဝင်ကြည့်ပါ။ အချိန်ဇယားကို DESelect သရုပ်ပြပါ။
Tags: a1 တယ်လီကွန်apiရက်ရာဇာအလိုအလျောက်ရှာဖွေမှုchrome extension ကိုအကြောင်းအရာရှာဖွေမှုဒေတာတိုးချဲ့မှုဒေတာတိုးချဲ့ချိတ်ဆက်မှုဒေတာတိုးချဲ့မှု အပိုင်းခွဲခြင်း။မရွေးချယ်ပါ။အီးမေးလ်သည် ရှာဖွေမှုကို ပေးပို့သည်။အီးမေးလ် နမူနာပုံစံ ရှာဖွေမှုအီးမေးလ်တင်းပလိတ်များမြစစ်ထုတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်များ ရှာဖွေခြင်း။google chrome တိုးချဲ့မှုGregory Nappiမင်္ဂလာပါလှုပ်ရှားမှုများကို မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း။query ရှာဖွေမှုရောင်းသူအရောင်းအင်အားထပ်တိုးလဲလှယ်ခြင်းအရောင်းအင်အားစု cdpsalesforce စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုcloud်းတိမ်သည်sfmcတီ - မိုဘိုင်းVolvo ကားများ ဥရောပ
Salesforce Marketing Cloud တွင် အလိုအလျောက် Google Analytics UTM ခြေရာခံခြင်းကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။